Torkia - Wikipedia
I Torkia, na Repoblika Torka, dia firenena iray eo amin' ny tapany andrefana (ao Atsinanana Akaiky) amin' i Azia Andrefana. Misy ampahany amin’ ny tanin’ ity firenena ity ao amin’ ilany atsinanana amin’ i Eorôpa: voazaran’ ny Andilan-dranomasin' i Bosphore ho roa (adrefana sy atsinanana), ohatra, i Istambul renivohitra. Mizara sisin-tany amin' i Grisia, amin' i Bolgaria, amin' i Jeôrjia, amin' i Armenia, amin' i Azerbaijàna, amin' i Iràna, amin' i Iràka ary amin' i Siria izy. Ny ranomasina manodidina azy dia ny Ranomasina Mainty, ny Ranomasin' i Marmara, ny Ranomasina Egea ary ny Ranomasina Mediteranea.
Sainam-pirenen' i Torkia
Sarin-tanin' i Torkia (teny frantsay)
Toerana misy an' i Torkia (amin' ny teny tiorka)
Ny vohon-tanin’ i Torkia dia anjakan’ ireo Tedrombohitra Ararata, izay ao amin’ ny tapany atsinanana, ka manana haambo 5 165 m ny tampona avo indrindra amin’ izany.
Avy any Azia Afovoany ny mponina any Torkia. Ahitana vondrom-poko bediabe ny ao amin’ io firenena io, ka isan’ izany ny Arabo, ny Armeniana, ny Grika, ny Jiosy ary ny Korda. Ny silamo no fivavahan’ ny maro any Torkia (98 %). Ny fiteny tiorka no teny ôfisialin' i Torkia. Atao hoe Türkiye sy Türkiye Cumhuriy izy amin' ny fiteny tiorka.
Seha-pamokarana lehibe indrindra any Torkia ny fambolena, indrindra ny fambolena varimbazaha, sy ny jono.
I Torkia eo anivon' izao tontolo izao
Kristianisma any Torkia
Anatôlia na Azia Minora
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Torkia&oldid=1046118"
Dernière modification le 4 Jolay 2022, à 11:15
Voaova farany tamin'ny 4 Jolay 2022 amin'ny 11:15 ity pejy ity.